“Fihazonana zava-mahadomelina sy faniratsirana…”: nahazo sazy mihantona telo volana i Francesca, zanak’i Me Hanitra | NewsMada
Niakatra ny fampanoavana tetsy Anosy ary niatrika fitsarana avy hatrany ny zanaky ny depiote Razafimanantsoa Hanitra, i Me Razafimahefa Francesca, omaly. Nilatsaka ny didy ka mandoa lamandy 50 000 Ar noho ny fihazonana zava-mahadomelina sy sazy mihantona telo volana noho ny faniratsirana mpitandro filaminana ny tenany. “Misaotra ny Holafitry ny mpisolovava sy ny mpisolovava rehetra. Teo koa ianareo nanampy sy nanotrona ary nivavaka. Lehibe ny famindrapony. Tsy mahafa-po ny didy nefa isaorana ny zavatra rehetra », hoy ny reniny, ny depiote Razafimanantsoa Hanitra tao amin’ny tambajotran-tsosialy. Nandà hatramin’ny farany ny fiampangana azy ity zanaky ny depiote Razafimanantsoa Hanitra ity. Efatra be izao rahateo ireo mpisolovava azy. Nilaza ho tsy afa-po izy ireo manoloana ny didy ka mbola handinika ny dingana hatao.
Paikady efa nomanina sy vela-pandrika
Tsiahivina fa voasaringotra ho nitondra zava-mahadomelina ity mpisolovava, zanaka mpanao politika ity, ny faran’ny herinandro teo teny Ampitatafika. Voalaza fa naniratsira mpitandro filaminana koa tamin’ny fisavana natao azy, araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena.
Etsy an-daniny, nanitrikitrika ny reniny, i Me Razafimanantsoa Hanitra fa efa paikady nomanina mialoha sy vela-pandrika izao natao izao ary nampifandraisina amin’ny politika ataony nefa tsy misy idiran’ny zanany akory.
Tsiahivina fa tonga marobe nifanotrona tamin’ity zanaky ny mpanao politika Tim ity ireo avy amin’ny mpisolovava, namany. Teo koa ireo olon-tsotra niatrika sy nanotrona izany. Rakotra mpitandro filaminana ny teo amin’ny manodidina ny fitsarana Anosy.